Ihe Ntube nke Viper - Nsonaazụ
Tupu ị gaa n'oké ọhịa, ị ga-achọ ịma ihe ize ndụ ndị na-echere mmadụ na gburugburu ebe a. N'oge opupu ihe ubi ruo n'etiti onwa June, vipers na-arụsi ọrụ ike, nsị ha kacha egbu egbu. Ma, agwọ nke agwọ a bụ, kama nke ahụ, ihe nchedo karịa ọchịchọ ịwakpo. Ka o sina dị, ọ dị mkpa ịmata ihe ga-esi na ya pụta mgbe agwụ agwọ agwọ, otu esi enyere onye ahụ aka na minit mbụ.
Kedu ka onye na-adder si dị?
Agwo nwere oke nha. Ụmụ nwoke dị mkpụmkpụ karịa nwanyị, ogologo ha dị ihe dị ka 60 cm, ụmụ nwanyị ruru n'ogologo 70 cm. N'ikike, a na-ahụ ihe atụ ndị dị ntakịrị na-eru otu mita n'ogologo. Agba nke viper dị iche: site na isi awọ ma ọ bụ bluish ka ọla kọpa-acha uhie uhie, e nwekwara nwa ojii, nke nwere àgwà mara n'ụdị zigzag nke yiri diamond n'ogologo. N'ihe banyere nwa, ụkpụrụ ahụ anaghị adị mfe. A na-ekepụ isi nke isi ahụ site na ndị ọzọ site n'olu olu.
Ihe na-esi na ya pụta mgbe ụmụ mmadụ na-ata ahụhụ
Nri viper bụ ihe na-egbu mgbu, ma ọ bụghị egbu egbu. Ọ dị mkpa inye aka n'onye ahụ n'oge na n'ụzọ ziri ezi. Enwere ike ịnwụ site na nsị viper dị ntakịrị, ọ bụ naanị 1%. Ebe kachasị mfe bụ n'olu na isi nke mmadụ, na-eri nri maka ụmụaka, ndị agadi ma ọ bụ ndị na-arịa ọrịa na ndị na-ahụ nfụkasị dịkwa ize ndụ.
Agwa na-echegbu onwe ya na-agba ọsọ mgbe o yiri ihe ize ndụ nye ya - mmadụ. Ma, tupu viper emerụ, ị ga-anụ ụdị àgwà ya, mgbe ahụ naanị ma ọ bụrụ na ọ chọghị izobe ma chee na ị nwere ike ize ndụ.
Ya mere, ọ bụrụ na ọnyà ahụ eruola ihe mgbaru ọsọ ya, kwadebe maka ihe ga-esi na ya pụta:
Nri ahụ n'onwe ya na-enye ihe mgbu dị egwu, enwere ọbara ọbara abụọ na akpụkpọ ahụ. Mgbe ahụ ihe mgbu ahụ na-etolite.
Nri ahụ na-acha ọbara ọbara, fụrụ akpụ.
Adrenaline, bụ nke na-apụta n'anwụ mgbe ọ na-atụ ụjọ, na-arụ ọrụ ọjọọ - mgbali elu na-ebili ma nsi na-agbasa ngwa ngwa n'ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na viper bitụ gị, ị ga-anwa ịghara ịtụ ụjọ.
Mgbe agwọ na-agwọ ọrịa, ọrịa ahụ na-arịwanye elu ngwa ngwa - onye ahụ na-arịa ọrịa amalite ịkwanye, ọ bụ ezie na ahụ ọkụ na-ebili.
Mgbe obere oge gasịrị, isi na-amalite ịgbagharị ma merụọ ahụ.
O siri ike na-eku ume - enweghi ume.
A na-agbaji ụda obi nke obi.
Enwere mmetụta nke ọgbụgba, vomiting nwere ike ịmalite.
Mgbe nsi gbasaa n'ọbara, nrụgide ahụ daa, n'ihi na ọbara na-erughị akụkụ dị mkpa, enweghi umengwụ na ahụ.
Mkpịsị ụkwụ na-aghọ ntụ oyi na oyi, a na-amụcha ihu ihu.
Ọ bụrụ na ọrịa ahụ daba na veins ma ọ bụ ụji elu - nke a dị oke ize ndụ, ebe nsị ahụ ga-agbasa n'oge ahụ kpamkpam, a ga-emezikwa ihe niile si na ya pụta.
Mgbe ụfọdụ ọ na-emetụta ọhụụ.
Ejikọta ọbara, ma ọ bụrụ na oge na-aga ịghara ime ihe, dịka nke a nwere ike ịnweta necrosis nke anụ ahụ n'ebe a na-ata.
Ọ bụrụ na ogologo oge ịghara ime ihe, ihe ga-esi na ya pụta bụ ndị ahụ, ọnọdụ ahụ siri ike, dịka, dịka ọmụmaatụ, nkwụsị aka ga-amalite ịzụlite.
Ihe ize ndụ ndị na-esi n'ite viper pụta ga-adabere n'ọtụtụ ihe:
ogologo nke agwọ ahụ;
arọ nke onye ahụ;
nchịkwa nke ahụike;
otu ebe na aru nke nsi na-egbu egbu;
ọnụ ọgụgụ nsi a na-egbu ya;
nhazi na oge nke onye mbu, ma nyekwa aka ọkachamara.
Ịga ezumike na okike ma ọ bụ naanị n'ọhịa maka mushrooms, ị ga-eji nwayọọ nwayọọ na-eje ije, nwee ogologo osisi n'aka gị, nke ị nwere ike ịnweta ahịhịa na bushes dị n'ihu gị. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-egbochi agwọ ahụ, ọ ga-enwe oge ịlaghachi, ma ọ bụrụ na ọ kpebie ịwakpo, ị ga-anọ n'ebe dị anya site na ya.
Hernia Schmorl nke eriri thoracic - ọgwụgwọ
Mbufụt nke gland saliv - mgbaàmà
Hyperemia nke ihu
Kedu ka ultrasound si eriri afọ?
Ogbugbu mgbu dị n'akụkụ aka nri n'okpuru ọgịrịga
Ụlọ nri kacha mma na St. Petersburg
Okpokoro okpokoro 2016
Ube ajị agba na akwarium - esi tufuo?
Esi eweputa oge?
Barley na anya - ọgwụgwọ n'ụlọ
Ụdị ụgbọ mmiri
Gịnị mere égbè ji egbu?
Kim Kardashian, Chrissie Tagen na kpakpando ndị ọzọ wụsara mmiri ara ehi na ihe ọhụrụ Fergie
Shannen Doherty gara ndị mmadụ mgbe ọ gbasịrị akụkọ banyere cancer
Tincture nke magnolia osisi vaịn - uru na nsogbu
Mgbidi nke mpempe akwụkwọ
Nsogbu dị elu - akpata na ọgwụgwọ
Akara eletrik maka ụmụ amụrụ ọhụrụ
Pasta na mushrooms - uzommeputa
Uwe na uwe aka
Ndị na-arịa ọrịa na penicillin